Canon Canon: Ahoana ny hosodoko malaza indrindra rehefa nandalo ny sivana Photoshop? | Famoronana an-tserasera
Ny kanonan'ny hatsarana dia miova rehefa mandeha ny fotoana. Izay nanjary foto-kevitry ny hatsaran-tarehy dia tsy misy intsony ankehitriny ary tsy misy intsony ny mijery ny fivoaran'ny idealy io rehefa mandeha ny fotoana amin'ny tantaran'ny zavakanto. Ireo mpanao hosodoko toa an'i Titian na i Gauguin dia nahita hatsaran-tarehy tamin'ireo vatan-dehivavy ireo. Fa inona no hitranga raha ny sangan'asa tandindona indrindra amin'ny tantaran'ny zavakanto dia tokony handalo ny sivana ankehitriny? Avy amin'ny tranonkala Takeapart Ity fanontaniana ity dia natolotra tamin'ny alàlan'ny gif animated fanoharana sasany izay nanjary ifantohan'ny adihevitra momba an'io.
Miaraka amin'ny Adobe Photoshop izy ireo dia nanandrana nahita filamatra hatsarana tsy azo tanterahina ary amin'ny alàlan'ny dokambarotra sy ny haino aman-jery mahazatra dia mody milaza fa tena misy sy azo tanterahina tokoa ny canon ankehitriny. Araka ny fantatrao, ny karazan-dahatsary rehetra dia vita: ahenao ny kibonao, ahetsiketsika ny valanoranon'ny valanoranom-bava, manitatra ny masonao sy ny molotra, atsaharo ny ketrona na ny cellulite ... Ny marina dia sarotra be izao ny mamantatra rehefa nisy sary namboarina, noho izany Etsy andaniny, io dia misy fiatraikany amin'ny fiheverana fa ny sehatra tsy misy fotony indrindra amin'ny fiarahamonintsika dia manan-janaka na tanora. Ireto ambany ireto dia zarainay aminao ity safidin'ny sary mihetsika ity mba hijerena amin'ny fomba marimaritra kokoa ny fahasamihafana misy eo amin'ny foto-kevitra taloha momba ny hatsarana sy ilay ankehitriny. Ahoana ny hevitrao momba an'io lohahevitra io? Avelao ao anaty hevitra ny hevitro!
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Famoronana an-tserasera » General » Inspiration » Canon Canon: Ahoana ny hosodoko malaza indrindra rehefa nandalo ny sivana Photoshop?
Rehefa avy nandalo Photoshop, afa-tsy ireo sary hosodoko farany dia toa nivoaka avy tany Auschwitz izy ireo.
Mamaly an'i carperio